Martyr Birol Yıldırım Boulevard Waxaa Lagu Furay Xaflad Lagu Dhaweynayo Buundada Melet Bridge | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52Martyr Birol Yıldırım Boulevard Wuxuu furay Adeegga Buundada New Melet
27 / 02 / 2020 Ciidamada 52, SAWIRADA, GUUD, hyperlinks, Gobolka Banaadir, WADADA, TURKEY
sehit birol yildirim boulevard oo leh buundo cusub oo melet ah ayaa la furay
Martyr Birol Yıldırım Boulevard, oo ay dhistay Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu ee Magaalada Ordu, iyada oo lagu badalayo wadada giraanta iyo Buundada 'New Melet Bridge', oo loo isticmaali karo badal wadada xeebta Badda Madoow, iyadoo loo qabtay xaflad.
Laga bilaabo meesha baska cusub laga raaco, wadada 5km ah, oo ku taal aagga warshadaha ee Karapınar Mahallesi oo ku daboolan darbado kulul laga soo bilaabo Buundada Yeni Melet ilaa isgoyska Kayabaşı, waxay noqotey waddo kale oo lagu maro wadada weyn iyo sidoo kale cufnaanta taraafikada ee gobolka.
“WAAN KU HADAA IN AAN MAGAALO BADAN”
Isagoo leh Ordu wuxuu qaadayaa talaabooyin adag si uu u noqdo magaalo sumcad leh, Duqa Magaalada Ordu Mehmet Hilmi Güler wuxuu yidhi, Maanta waxaan u soo qaadanaynaa laba shaqo oo qurux badan Ordu. Midkood waa Buundada 'New Melet Bridge', oo dhererkeedu yahay 236 mitir. Buundadan waxay noqon doontaa markab cusub oo Ordu ah, waxay dejin doontaa taraafikadayada. Waxaan qayb weyn ka qaadanay keenista jadwalka hore anagoo ku dhaqaaqaynna buundadan, oo la qorsheeyay in magaaladeena taariikh kale loo soo qaado. Waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo Waddooyinka Waaweyn ee adeeggan u keenay magaaladeenna muddo 2 bilood ah. Tani waxay muujineysaa xoogga dowladnimadeena. Kadib waxaan furnay boulevard fiican. Muwaadiniinta reer Kadirşinas, waxaan u bixinay magaca shahiidheenna Birol Yıldırım, oo isagu naftiisa u huray dhiiggiisa iyo noloshiisa dalkan, ilaa heerkan. Wadada 5 km ha ka faa'iideysato muwaadiniinteena. Qiyaasta qiimaha labada maalgashi waa 30 milyan oo TL. Waxaan sii wadnaa inaan qaadno tallaabooyinka geesinimada leh iyo go'aannada. Waxaan rabnaa inaan ku darno howlo badan oo qurux badan magaaladeenna. Waxaan ku jirnaa wadada si aan u noqono magaalo sumad leh. Dareenkaas, mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan wuxuu ahaa xallinta dhibaatada taraafikada. Tallaabadan, taraafikadayadu waxay noqon doontaa mid raaxo badan. Waxaan ka fikirnaa buundo kale oo Melet ay ku kulanto badda. Waxaan sidoo kale qorsheyneynaa tan. Ordu waxay noqon doontaa magaalo ay ku yaalliin buundooyinkeeda. Melet waxay noqon doontaa xarun nolol qurux badan. Markii aan gaarno tan, ciidamadeennu waxay ku noqon doonaan kuwo aad u qurux badan xagga dalxiiska iyo warshadaha. ”
"WAA KU XIGEENNAANSHAHA MUUQAALKA BULSHADA METROPOLITAN.
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Gudoomiyaha Gobolka Ordu Seddar Yavuz, oo khudbadiisa ku bilaabay isaga oo u mahadcelinaya Mehmet Hilmi Güler, ayaa yidhi, “Waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Duqa Magaaladeena shaqadiisa waana u hambalyeynayaa. Markii biriijka Cevizdere burburay musiibo sanadihii la soo dhaafay, waxaan aragnay inaanan haysanin wado kale. Waa muhiim inaadan gudbin buundada. Illaahay ha ka fogeeyo, muhiimada maalgashiyadan marka loo eego istiraatiijiyadda, amniga iyo gaadiidkaba waxay si cad u muuqdaan xaaladaha la mid ah. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in laga fiirsado maalgashiga dhinacan. Waxaan u hambalyeynayaa Maareeyaha Gobolka ee Duulista Hawada iyo Duqa Magaalada waxaana rajeynayaa in maalgashigu faa iido u yeelan doono gobolkeena. ”
Khudbadihii kadib, labada maalgashi ee uu sameeyay salaada furitaanka ee gobolka Mufti Mürsel Öztürk ayaa si rasmi ah loo furay kadib markii borotokoolka uu jaray furitaanka furitaanka.
Martyr Birol Yildirim Caddesi si loo Yareeyo Loadadka Gaadiidka Ciidanka
Martyr Rafet wuxuu arkay sawirada Karacan Boulevard
Sehit Polis Yalçın Yamaner Boulevard Modernized
Tareenka cusub ee Samsun ayaa bilaabay adeegga xaflad
Waddada loo yaqaan "Ring Road" oo loo furay adeeg
Tavşanlı - Kutahya Railbus ayaa la furay xaflad.
Sincan Metro Line ayaa ka furmaya xaflad weyn (Video-Photo Gallery)
Malatya Gar Yaya Underpass oo loo furay Adeeg
Gebze Halkalı Marmaray Line Adeegga Furan
Gawaarida iyo Gawaarida Gawaarida ayaa la furay xaflado lagu qabtay magaalada Denizli
Kaameeraha Dabaysha ee Dabaysha ayaa lagu rakibay Saldhigyada Marmaray!
Adeegyada tareenka ee ka baxsan Başkentray iyo Marmaray si ku meel gaar ah ayaa loo hakiyey